केपी ओलीलाई भेट्न आँफै बालकोट जाँदैछन् देउवा ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
केपी ओलीलाई भेट्न आँफै बालकोट जाँदैछन् देउवा ?
परमादेश बाट प्रधानमन्त्री बनेको ५० दिन पुगे पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहारा खोज्न थालेका छन्।
भर्खरै मात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विश्वास पात्र कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न ओली निवास बालकोट पठाएका थिए । ओली र कार्की विच डेढ घण्टा भन्दा लामो समय कुराकानी भएको थियो ।
सत्तासाझेदार दलहरुका विचमा खटपट आइरहेको बेलामा ओली देउवा नजिकिएको कुरालाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ । यस विच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली विच वान टु वान भेटवार्ता हुन लागेका चर्चा पनि सुरु भएको छ ।
ओलीलाई भेट्न आज या भोलीनै प्रधानमन्त्री देउवा ओली निवास बालेकोट जान लागेको चर्चा चलेको छ । देउवाको दुत बेनर ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको ब्रिफिङ सुने पछि देउवा आफैँले ओली सँग भेट्न खाजेको बताइएको छ ।
देउवाले दल विभाजन सँग सम्बन्धीत अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजन गराए पछि ओली देउवा सम्बन्ध चिसिएको छ । ओली सँग सम्बन्ध सुधार नगरी अघि बढ्न नसकिने निष्कर्षमा देउवा पुगेका छन्। एमसीसी उपाध्यक्ष नेपाल आउँने तय भए पछि देउवा ओली सँग नजिकिएका छन् ।
देउवा ओली सँग एकाएक नजिक भए पछि सत्तागठबन्धनका दलहरु भने झस्किएका छन् । विशेष गरि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल आली र देउवा नजिकिए पछि नराम्रो सँग झस्किएको बताइएको छ ।
ओली र देउवा एक अर्का प्रति पहिले देखी नै नरम देखिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री भए पछि देउवाले केपी ओली विरुद्ध त्यति तिखो रुपमा कहिल्यै बोलेका छैनन् । उनले ओलीलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्न खोजको देखिन्छ । ओलीले पनि देउवालाई भन्दा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई तारो बनाएको देखिन्छ ।
मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न समेत नसकेर लाचार बनेको सत्तागठबन्धनमा अचानक ओली देउवा मिलनले झस्का दिएको छ । मन्त्रीपरिषदको भागबण्डा मिलाउँन नसकेका बेला ओली सँग मिल्न खोजे जस्तो देखाएर गठबन्धनका नेताहरुलाई साइजमा राख्न पनि देउवाले आइडिया लगाएको चर्चा पनि चलेको छ ।